Efa misy ho an’ny mpamaky amin’ny teny Anglisy ny tantara foronina Japoney maoderina noho ny gazetiboky literatiora vaovao · Global Voices teny Malagasy
Efa misy ho an'ny mpamaky amin'ny teny Anglisy ny tantara foronina Japoney maoderina noho ny gazetiboky literatiora vaovao
Tanjona ny ho be pitsony kanefa takatry ny rehetra
Voadika ny 15 Oktobra 2020 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Nederlands, Français, Қазақша, English
Ny gazetiboky MONKEY, solon'ilay gazety literera be mpitia Monkey Business. Pikantsary tao amin'ny tranonkala Monkey.
Tamin'ny volana oktobra no nivoaka ny Monkey, gazetiboky literera amin'ny teny anglisy vaovao indrindra any Japana. Mamoaka tantara foronina maoderina Japoney miaraka amin'ny dikateny Anglisy Ilay gazety, izay manasongadina ireo mpanoratra sy mpandika teny malaza eran-tany.
Ahitana ny fandikan-teny maro amin'ny literatiora Japoney tranainy sy vaovao ny famoahana voalohany tamin'ity gazety literera ity, ary manamora ny fifanakalozan-kevitra momba ny fandikanteny. Anisan'ireo misongadina ny “The Visitor” [Ny Mpitsidika], fitantarana an-tsary nataon'i Jon Klassen miaraka amin'ny lahatsoratr'i Yōko Ogawa ary nadikan'i Lucy North, sy ny “The Razor” [Ny Hareza] an'i Naoya Shiga, izay nadikan'i Ted Goossen, miaraka amin'ny fanamarihana nataon'ilay mpanatontosa sarimihetsika malaza Hirokazu Koreeda.
Naorin'ilay mpandika teny Japoney Motoyuki Shibata, izay nandika amin'ny teny Japoney an'i Paul Auster sy ireo mpanoratra malaza hafa, Monkey dia famelomana indray ny Monkey Business, izay notantanan'i Shibata nandritra ny taona maro niaraka tamin'i Ted Goossen, ilay kintana malaza dia malaza amin'ny mpandika teny malaza amin'ny literatiora japoney Haruki Murakami. Afaka namelona indray ny gazetiboky izy roa ireo niaraka tamin'ny fanampian'i Tadashi Yanai, mpanorina ilay mpaninjara akanjo Japoney goavana Uniqlo.
Na dia mety hampientanentana aza ny lisitr'ireo mpanoratra sy mpandika teny – mahavariana mihitsy aza – ho an'ireo mpankafy literatiora japoney, hoy i Eric Margolis, izay nitafatafa tamin'i Shibata ho an'ny Japan Times talohan'ny nanombohana azy, ny kinasan'ny Monkey dia ny mba ho be pitsony kanefa takatry ny rehetra:
Raha ho tsotsorina loatra, mizara ho haisoratry ny tantara foronina – ilay karazana miakatra mankany amin'ny loka malaza Akutagawa — sy ho an'ny literatiora malaza — ilay karazana miakatra mankany amin'ny loka Naoki, ny sehatry ny haisoratra Japoney. Nilaza i Shibata fa mitontona ao afovoamboany any ny Monkey.
Ireo nisoratra anarana ho an'ny filazam-baovao Monkey dia mahazo maimaim-poana ny “The Thirteenth Month” amin'ny PDF, fandikana fohy avy amin'ny tantaran'i Mieko Kawakami:
Manolotra maimaimpoana ny fahafahana mitroka ara-dizitaly ny tantara fohy nosoratako “The Thirteen Month” [ny volana faha-13] amin'ny teny Anglisy izay niseho voalohany tao amin'ny “Monkey Business Boky faha-5″ Ny gazetiboky literera mamirapiratra “Vaovaom-panoratana MONKEY avy eto Japana”!
Nofaritana ho “fandinihana amin'ny fomba samihafa ny fanontaniana ifotony hoe: Midika inona ny fisiana ?” ilay bokitantaran'i Kawakami farany hoe “Breasts and Eggs”, [Nono sy atody] ary nahazo fankasitrahana tany Japana sy manerantany. Ilay tena ankafizin‘i Haruki Murakami, namoaka boky lava misy ny antsafa (amin'ny teny Japoney) niarahana tamin'ilay mpanoratra tantara i Kawakami. Nisarika ny saina ihany koa izy momba ny fiakarany an-tsehatra tamin'ny fanakianana nifanatrehana mivantana momba ny bokitantaran'i Murakami 2017 “Killing Commendatore”, izay nilazany fa angamba mifantoka be loatra amin'ny nonon'ny vehivavy ny literatiora malala ao Japana – ankoatra ireo filàna hafa tafahoatra.
Miaraka amin'ny fandikan-tenin'ny mpanoratra tantara manan-daza toa an'i Kawakami sy ny hafa, mampanantena ny Monkey fa ho gazety literera miaina sy mampientanentana. Azo vidina amin'ny endrika maro samihafa ao amin'ny tranokalan'ny Monkey, amin'ny endriny vita pirinty ary azo alaina amin'ny volana Desambra 2020 ny dika elektronika sady azo trohana amin'ny famoahana voalohany.